यस्ता ९ किसिमका संकेत देखिए भनेबुझ्नुस्, फोक्सो’को क्या’न्सर हुँदैछ…
एजेन्सी । फोक्सोको क्यान्स’र भएको पहिलो अवस्थामा कुनैत्यस्तो ख्याल हुनेखालको सङ्केत देखाउँदैन । लगभग ४० प्रतिशतमा फोक्सोको क्या’न्सर निधन गरिन्छ । तर यो रोगले उच्च चरण लिए पछि मात्र निध’न हुन्छ । यसै बारे आज केहिजानकारी लिएर आएका छौ । जुनसंकेत तपाइको परिवार ,साथीभाइलाई त भएको छैन ? जानौँ कस्ता-कस्ता सङ्केत देखिदारहेछन्: निको नहुने खोकीः यस्तो खोकी जुन चिसो बाट वा स्वाश्प्रस्वाश प्रणालीको इन्फेक्सनले गर्दा हुन्छ । जुन हफ्ता ,दुइ हफ्ता सम्म रहन्छ तर दृढ खोकी जुन दृगकालिन हुन्छ त्यो फोक्सोको क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ । यदि खोकी सुख्खा होस् वा…
मःम बारेका यस्ता ५ रोचक तथ्य- तपाईंलाई अचम्मलाग्न सक्छ…
काठमाडौं– एक भनाई नै छ– रेष्टुरेण्टमा गएरखाजा अर्डर गर्न जति मेनु हेरेपनि नेपालीले अन्तिममा मःम नै माग्छन् । यो कुरा हुन पनी हो । शहरमा मःम को माग एकदमै धेरै रहेको छ । गाउँघर तिर पनी पछिल्लो समय विभिन्न कटेजहरूमा मःम को स्वाद लिन सकिन्छ । अहिले बजारमा बफ, चिकेन, मटन, भेज, पनीर लगायतका धेरै स्वादमा पाइने मःम पाइन्छ । यी मःमको परिकार फरक–फरक हुन्छन् । आज हामीले मःम बारे केही प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छौँ । –अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी बिक्ने मःम भनेको बफ मःम हो ।…
यी मोडल जसले पुरुषले जस्तै लामो ‘दारी’ पालेर राखिन् विश्वरेकर्ड (फोटोफिचर)
९ असोज,एजेन्सी । संसारमा अचम्मित पार्ने प्रतिभा भएका धेरै मानिसहरू छन् । धेरैले अनौठो कार्य गरेरै ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’ पनि राखेका छन् । यस्तै एक महिला मोडलले पनि आफ्नो अनौठो प्रतिभाले संसारलाई नै चकित पारेकी छिन् । उनी विश्वकै सबैभन्दा लामो दारी पाल्ने युवती हुन् । उनलाई देख्ने जो कोही हेरेको हेर्यै हुन्छ । उनको त्यो लामो दारी देखेर पुरुष हुन की महिला भनेर धेरै झुक्किन्छन् । बेलायतकी मोडल हरनाम कौर (harnaam kaur) नाम गरेकी उनी एक मोडल पनि हुन् । उनको दाह्री ६ इञ्च लामा छन् ।…
आइफा अवार्ड २०१९ मा यस्ता देखिए बलियुड सेलिब्रिटीहरु हेर्नुहोस ३२ तस्बिरहरु
एजेन्सी : बलियुड क्षेत्र ग्ल्यामर र चकाचौधले भरिपुर्ण उध्योग फिल्मी सेलिब्रेटी हरुको सान प्रत्यक कार्यक्रम हरुमा कार्यक्रम का सान बनेका हुन्छन फिल्मी सेलिब्रेटि हरु जब आइफा अवार्ड को कुरा सुरु हुन्छ तब मनोरंजन को उत्सब सुरु हुन्छ आइफा अवार्ड मा जति चर्चा अवार्ड र नाटक नायिका को हुन्छ तेती चर्चा नाइट मा सेलिब्रेटि हरुको लुक ड्रेसअप को पनि तेती नै चर्चा हुन्छ ! आइफा अवार्ड २०१९ को साझ मा पनि कुनै कमि रहेन कुनै सेलिब्रेटी कुनै भन्दा कम रहेनन् कट्रिना ले लगाएको पहिरन धेरै नै चर्चामा रहेको छ हेर्नुहोस केहि…
आमा बन्दै ‘चपली हाइट’की अभिनेत्री विनिता बराल
काठमाडौँ । चलचित्र ‘चपली हाइट’की अभिनेत्री विनीता बराल आमा बन्ने भएकी छिन् । अभिनेत्री विनीता बरालले ‘सर्प्राइज’ भन्दै आफू गर्भवती भएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकी छिन् । केही वर्ष यता अमेरिकामा बस्दै आएकी उनले गर्भवती भएका तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गर्दे आफू आमा बन्न लागेको जानकारी दिएकी छिन् । तिलक पौडेल सँग विवाह गरेर अमेरिका गएकी उनले फेसबुकमा ‘सानी विनीता आउँदै छिन्’ क्याप्सन लेखेकी छिन् । पति तिलक पौडेललाई समेत ट्याग गर्दै गरेको पोस्टमा विनीताका प्रशंसकले बधाई दिएका छन् । पछिल्लो समय कृषि पेसा र किताब लेखनमा रहेकी विनीताले अमेरिकी…
सोनिका कहिले पारससँग टिकटकमा व्यस्त त कहिले कपिलशर्मा शोमा…(हेर्नुहोस तस्बिरसहित )
सोनीका रोकाए भन्ने बित्तिकै धेरै नेपालि हरुले उनलाई चिन्छन युटुब बाट एकाएक चर्चामा आएकी मोडल तथा भिजे सोनीका रोकाए हुन् ! उनले एक पछी एक चर्चित व्यक्तिहरु संगको फोटो सामाजिक संजाल मा राख्दै चर्चित हुदै आइरहेकी छिन ! पूर्वयुवराज शाह पारस संग धेरै नै नजिक भएकी सोनिका ले कहिले उनीसंग को तस्बिर सेयर गर्छिन त कहिले उनीसंग को टिकटक त्यति मात्र हैन भारतको चर्चित कमेडी सो द कपिल शर्मा सो का कपिल संग पनि उनले स्टेज मा पुगेर फोटो सामाजिक संजाल मा सेयर गरेकी छिन ! आफ्नै युट्युब च्यानल ‘द…
एसि’ड आक्र’मणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई बलिउड अभिनेता वरुण र कृतिको यस्तो सन्देश (भिडियो)
असोज ९, २०७६ काठमाडौँ । केही समय पहिले एसि’ड आ’क्रमणमा परेकी १४ बर्षिया किशोरी मुस्कान खातुनलाई बलिउडका अभिनेता वरुण धवनले भिडियो सन्देश नायिका कृति सेननले भिडियो कलमा कुरा गरेकी छिन् । कृतिले अभिनेता धवनलाइ उक्त कुराको जानकारी गराएपछि भिडियो सन्देश पठाएका थिए । अहिले वरुणले पठाएको उक्त सन्देश सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । कृति र वरुण मुस्कानका मन पर्ने नायक/नायिका हुन् । वरुणले सन्देशमा भनेका छन्–‘मुस्कान, मलाई तिम्रो बारेमा कृतिले जानकारी गराएकी थिइन् । मैले थाहा पाए अनुसार, तिमीलाई अध्ययन गर्न निकै नै मन पर्छ । तिमी ठिक भएपछि…
मुन्नी र बलेको प्रेम देखि विवाह सम्मको कुरा (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । सागर लम्साल ‘बले’ र प्रियाना आचार्य ‘मुन्नी’को अभिनयमा रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक टेकन दाहालको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘कालो कोठी’ केही समय पहिले बजारमा आएको हो । गीतलाई गीतकार तथा सङ्गीतकार प्रेम पाण्डेले लेखेका हुन् । गीतमा सङ्गीत प्रेम पाण्डेकै रहेको छ । भिडियोको अभिनयमा हाँस्यटेलिसिरयलका २ चर्चित कलाकारहरू सागर लम्साल र प्रियाना आचार्य अभिनय रहेको छ । राजीव समरको कोरियोग्राफीमा अर्जुन तिवारीले खिचेको भिडियोलाई सान थापाले निर्देशन गरेका हुन् । उक्त गीतको भिडियोलाई गायक टेकेन दाहालले आफ्नै नामको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट बजारमा ल्याएको…
चर्चित हास्य कलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’को जन्मदिनमा जिग्रीको यस्तो शुभकामना
काठमाडौँ ९ असोज । आज चर्चित हास्य कलाकार अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’को जन्मदिन परेको छ । असोज ९ गते नुवाकोट जिल्लाको ओखरपौवामा जन्मिएका घिमिरेको आज शुभ जन्मदिन परेको हो । पाँडे नामले परिचित हास्य कलाकार अर्जुन घिमिरे कक्षा ६ मा पढ्दा पढ्दै कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका थिए । उनले आफ्नो अभिनयको यात्रा हास्यटेलिसिरियल “हिजो आजको कुरा”बाट सुरु गरेका हुन् । अभिनय यात्रा बिचमै छाडेर घिमिरे नेपाली सेनामा समेत भर्ती भएका थिए । नेपाली सेनामा २ बर्ष जागिर खाएर भागेका अर्जुन घिमिरे “बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर” नाम टेलिसिरियलबाट पुन: कलाकारितामा फर्किएपछि उनको भेट…
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीका लागि पोस्ट-स्ट’डी वर्क भिसाको अ’वधि बढाउन अ’नुसन्धान अधिकारि’हरुको सु’झाव
अस्ट्रेलिया अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीका लागि पोस्ट-स्ट’डी वर्क भिसाको अ’वधि बढाउन अ’नुसन्धान अधिकारि’हरुको सुझाव । अष्ट्रेलियाका डेकिन अनुसन्धान’कर्ताहरुले विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध हुने ४८५ भिसाको प्रभा’वकारिताको बारेमा अध्य’यन गरेका छन् । पोस्ट स्टडी वर्क भिसा अर्थात ४८५ भिसा वि’द्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियाको कुनै यु’निभर्सिटीबाट पढाइ सकेपछि त्यहाँ काम गर्न र ब’स्नको लागि दिइने अस्था’यी भिसा हो अनुसन्धानकर्ताहरुले सरकारलाई ४८५ भिसाको अवधि बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार, अन्य देशका विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलियामा पढाइ सकेपछि काम गर्न पाइने, कामको अनुभव लिन पाइने र आर्थिक रुपमा सक्षम भइने भएका कारण नै पढ्नको लागि अष्ट्रेलिया आउने गरेको पाइएको…